“Musakanganwa Kugamuchira Vaeni Zvakanaka”—VaHebheru 13:2 | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Musakanganwa kugamuchira vaeni zvakanaka.”—VAH. 13:2.
NZIYO: 124, 79
Nei tingafanira kugadzirisa maonero atinoita vaeni?
Bhoazi akaratidza sei maonero anoita Jehovha vaeni pamabatiro aakaita Rute?
Tingaratidza sei mutsa kuvaeni?
1, 2. (a) Vakawanda vanenge vatamira kune dzimwe nyika vanosangana nematambudziko api mazuva ano? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.) (b) Bhaibheri rinoyeuchidza vaKristu nezvei, uye izvi zvinomutsa mibvunzo ipi?
MAKORE anodarika 30 apfuura, Osei  akabva kuGhana achienda kuEurope. Panguva iyoyo akanga asiri Chapupu. Anoti: “Ndichangosvika, ndakaona kuti vanhu vakawanda vakanga vasina kana basa neni. Mamiriro ekunze akanga akasiyana nekure neandainge ndakajaira. Pandakabva panhandare yendege, ndakarohwa nechando zvandainge ndisati ndamboita, ndikatanga kuchema.” Osei akaita gore rese asati awana basa kwaro nekuti aisagona mutauro weko. Sezvo aiva kure chaizvo nehama dzake, aisurukirwa uye aisuwa kumba.
2 Waizoda kuti vamwe vakubate sei kana izvozvo zvikaitika kwauri? Zvaisazokufadza here kana ukagamuchirwa nemaoko maviri paImba yeUmambo, pasinei nenyika yaunobva kana kuti ruvara rweganda rako? Bhaibheri rinotokurudzira vaKristu vechokwadi kuti: “Musakanganwa kugamuchira vaeni zvakanaka.” (VaH. 13:2) Saka ngationgororei mibvunzo inotevera: Jehovha anoona sei vaeni? Nei tingafanira kugadzirisa maonero atinoita vaeni? Uye tingabatsira sei vanobva kune dzimwe nyika kuti vanzwe vakasununguka muungano medu?
JEHOVHA ANOONA SEI VAENI?
3, 4. Maererano naEksodho 23:9, vanhu vaMwari vaifanira kubata sei vanhu vekune dzimwe nyika, uye nei vaifanira kudaro?
3 Pashure pekunge Jehovha anunura vanhu vake kubva muIjipiti, akavapa mitemo yaiita kuti vabate zvakanaka vatorwa vavakabuda navo muIjipiti. (Eks. 12:38, 49; 22:21) Sezvo vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachiwanzoomerwa neupenyu, Jehovha akaita urongwa hwekuti vabatsirike. Humwe urongwa hwacho hwaiva kodzero yekunhonga zvaisaririra pakukohwa.—Revh. 19:9, 10.
4 Jehovha haana kungorayira vaIsraeri kuti varemekedze vatorwa, asi akaita kuti vavanzwire tsitsi. (Verenga Eksodho 23:9.) VaIsraeri vaiziva ‘manzwiro emunhu anenge ari munyika isiri yake.’ Kunyange pavakanga vasati vava varanda, vaHebheru vangangodaro vaisemwa nevaIjipiti nemhaka yerudzi rwavo kana kuti chitendero chavo. (Gen. 43:32; 46:34; Eks. 1:11-14) VaIsraeri vakanga vaona chitsvuku pavaigara munyika isiri yavo, asi Jehovha aitarisira kuti vabate mutorwa ‘semunhu wemunyika yavo.’—Revh. 19:33, 34.
5. Chii chichatibatsira kuratidza maonero anoita Jehovha vanhu vakabva kune dzimwe nyika?
5 Mazuva ano, tine chokwadi chekuti Jehovha haana kuchinja maonero aanoita vanhu vakabva kune dzimwe nyika vanopinda misangano neungano dzedu. (Dheut. 10:17-19; Mar. 3:5, 6) Kana tikafunga nezvematambudziko avari kusangana nawo, akadai sekusarurwa kana kusagona mutauro, tichatsvaga nzira dzekuvaratidza mutsa uye kuvanzwira ngoni.—1 Pet. 3:8.
TINOFANIRA KUGADZIRISA MAONERO ATINOITA VAENI HERE?
6, 7. Chii chinoratidza kuti vaKristu vepakutanga vakakwanisa kurega tsika yekusarura yainge yakadzika midzi?
6 VaKristu vepakutanga vakakwanisa kurega tsika yekusarura vamwe yakanga yakadzika midzi muvaJudha. PaPendekosti ya33 C.E., vaya vaigara muJerusarema vakagamuchira vaKristu vakanga vachangobva kutendeuka vaibva kune dzimwe nyika. (Mab. 2:5, 44-47) Rudo rwakaratidzwa nevaKristu vechiJudha kuvatendi vaibva kune dzimwe nyika rwairatidza kuti vainzwisisa chinonzi “kugamuchira vaeni zvakanaka.”
7 Asi ungano yechiKristu yekutanga payaikura, pane zvakazoitika zvaiita sekuti zvaikonzerwa nerusaruro. VaJudha vaitaura chiGiriki vakagunun’una kuti chirikadzi dzavo dzakanga dzisiri kubatwa zvakanaka. (Mab. 6:1) Kuti vagadzirise nyaya yacho, vaapostora vakagadza varume vanomwe kuti vave nechokwadi chekuti hapana aisiyiwa. Varume vacho vose vaiva nemazita echiGiriki, zvichiratidza sekuti vaapostora vaida kuderedza kusagadzikana kungangodaro kwaiva pakati pevaKristu vepakutanga.—Mab. 6:2-6.
8, 9. (a) Mibvunzo ipi ingatibatsira kuona kana tichisarura vamwe kana kuti tichidada nerudzi rwedu? (b) Chii chatinofanira kubvisa mumwoyo medu? (1 Pet. 1:22)
8 Kunyange tingasazviziva hedu, tose tinoita zvinhu zvichienderana netsika dzedu. (VaR. 12:2) Uyewo tinogona kunzwa vavakidzani, vanhu vatinoshanda navo, kana kuti vekuchikoro vachitsvinyira vamwe nemhaka yezvavari, rudzi rwavo kana kuti ruvara rweganda. Maonero akadaro ane rusaruro anotikanganisawo here? Uye tinoita sei kana mumwe munhu akatsvinyira nyika yedu, zvimwe achiwedzeredza mashoko ekunyepa paanotaura nezvetsika dzedu?
9 Muapostora Petro aimbosarura vanhu vaisava vaJudha, asi zvishoma nezvishoma akakwanisa kubvisa maonero asina kunaka mumwoyo make. (Mab. 10:28, 34, 35; VaG. 2:11-14) Saizvozvowo, kana tikaona kuti tine karusarura kana kuti kakudada nerudzi rwedu, tinofanira kurwisa kuti tikabvise mumwoyo medu. (Verenga 1 Petro 1:22.) Chii chingatibatsira kuita izvozvo? Tinofanira kuyeuka kuti tose zvedu hatina kukodzera kuwana ruponeso; tiri vanhu vane chivi pasinei nekuti tiri venyika ipi. (VaR. 3:9, 10, 21-24) Saka chii chingaita kuti tizvione setiri nani kupfuura vamwe? (1 VaK. 4:7) Tinofanira kuva nemaonero akafanana neaiva nemuapostora Pauro, uyo akaudza vamwe vaKristu kuti vakanga ‘vasisirizve vanhu vasingazivikanwi uye vatorwa, asi nhengo dzeimba yaMwari.’ (VaEf. 2:19) Kushanda nesimba kuti tirege kusarura vanhu vakasiyana nesu kuchatibatsira kuti tipfeke unhu hutsva.—VaK. 3:10, 11.
10, 11. Bhoazi akaratidza sei maonero anoita Jehovha vaeni pamabatiro aakaita Rute wekuMoabhi?
10 Bhoazi akaratidza maonero anoita Jehovha vaeni pamabatiro aakaita Rute, mukadzi wekuMoabhi. Paakauya kuzoongorora minda yake panguva yekukohwa, Bhoazi akaona mukadzi uyu achishanda nesimba achitevera vakohwi vake. Paakanzwa kuti Rute akanga akumbira kuunganidza zvaisaririra mumunda kunyange zvazvo aisafanira kuita zvekukumbira, Bhoazi akaita kuti avhomorerwe zvimwe zviyo pazvisote.—Verenga Rute 2:5-7, 15, 16.
11 Kukurukura kwavakazoita kunoratidza kuti Bhoazi akava nehanya naRute uye nekuomerwa kwake neupenyu semunhu akanga abva kune imwe nyika. Akamuti arambe achishanda ari pedyo nevamwe vakadzi vechidiki kuitira kuti asazonetswa nevarume vaishanda mumunda. Akavawo nechokwadi chekuti Rute awana zvekudya nemvura zvakakwana, sezvaingoitawo vashandi vaibhadharwa. Uyewo, Bhoazi haana kutaura nemukadzi uyu wekune imwe nyika aiva murombo achimutarisira pasi, asi akamukurudzira.—Rute 2:8-10, 13, 14.
12. Kuratidza mutsa kuvanhu vatsva vanenge vabva kune dzimwe nyika kunovabatsira sei?
12 Bhoazi akabayiwa mwoyo nekuda kwaiita Rute vamwene vake Naomi, uye akafarirawo kuti Rute akanga ava munamati waJehovha. Mutsa waBhoazi waitova kuratidzwa kwerudo rwaJehovha rwakavimbika kumukadzi uyu akanga auya ‘kuzotsvaka kupotera pasi pemapapiro aMwari waIsraeri.’ (Rute 2:12, 20; Zvir. 19:17) Mazuva anowo, mutsa wedu unogona kubatsira “vanhu vemarudzi ose” kuti vazive chokwadi uye vaone kuti Jehovha anovada.—1 Tim. 2:3, 4.
Tinogamuchira vaeni nemaoko maviri here pavanosvika paImba yeUmambo? (Ona ndima 13, 14)
13, 14. (a) Nei tichifanira kuedza chaizvo kukwazisa vaeni paImba yeUmambo? (b) Ungaita sei kuti zvikuitire nyore pakutaura nevanhu veimwe tsika?
13 Tinogona kuratidza mutsa kuvanhu vekune dzimwe nyika vanenge vachangobva kuuya nekuvakwazisa zvine ushamwari paImba yeUmambo. Tinogona kunge takaona kuti dzimwe nguva vanenge vachangobva kupinda munyika medu vanenge vachinyara uye vanoenda pavo vega. Nemhaka yemarererwo avakaitwa kana kuti zvavari, vanogona kuzvitarisira pasi kana vachizvienzanisa nevanhu verumwe rudzi kana kuti veimwe nyika. Saka tinofanira kutanga isu kuvafarira nemwoyo wese. Kana JW Language ichiwanika mumutauro wako, inogona kukubatsira kudzidzira kukwazisa vatsva nemutauro wavo.—Verenga VaFiripi 2:3, 4.
14 Unogona kunzwa usina kusununguka kuti utange kutaura nevanhu veimwe tsika. Kuti zvikuitire nyore, unogona kutanga kutaura nezvako. Unogona kutoona kuti pane zvakawanda zvamakafanana kupfuura zvamakasiyana uye kuti tsika imwe neimwe ine payakanakira nepaisina.
ITA KUTI VOSE VANZWE VAKASUNUNGUKA
15. Chii chichatibatsira kuti tinzwisise vaya vari kuedza kujairana nenyika yatinogara?
15 Kuti ubatsire vamwe kuti vanzwe vakasununguka muungano, zvibvunze kuti, ‘Dai ndaiva kune imwe nyika, ndaizoda kubatwa sei?’ (Mat. 7:12) Ratidza mwoyo murefu kune vatsva vari kuedza kujairana nenyika yaunogara. Pakutanga, tingasanzwisisa mafungiro avo kana kuti maitiro avanoita zvimwe zvinhu. Asi pane kutarisira kuti vaite zvatinoita mutsika dzedu, tadii tangovagamuchira sezvavari?—Verenga VaRoma 15:7.
16, 17. (a) Tingaita sei kuti tive pedyo nevaya vane tsika dzakasiyana nedzedu? (b) Zvii zvatingaita kuti tibatsire vakabva kune dzimwe nyika vari muungano medu?
16 Kana tikadzidza nezvenyika kana kuti tsika dzevaya vanobva ikoko, zvinogona kuva nyore kuti tikurukure navo. Patinoita kunamata kwemhuri, tinogona kutsvakurudza nezvevanhu vatisinganyatsozivi nezvavo vari muungano medu kana kuti mundima medu. Imwe nzira yekuti tive pedyo nevaya vakabva kune dzimwe nyika ndeyekuvakoka kumba kwedu kuti vazodya nesu. Sezvo Jehovha ‘akavhurira vemamwe marudzi suo rokutenda,’ ngativhurireiwo suo redu vaeni “vane ukama nesu mukutenda.”—Mab. 14:27; VaG. 6:10; Job. 31:32.
17 Kana tikawana nguva yekutandara nemhuri yakabva kune imwe nyika, tinogona kunyatsoona zvavari kuedza kuita kuti vajairane netsika dzedu. Tinogona kuona kuti vanoda kubatsirwa kudzidza mutauro wedu. Uyewo, tinogona kuvabatsira kutsvaga mabasa kana kuti pekugara pakanaka. Kuita izvozvo kunogona kubatsira zvikuru vatinonamata navo.—Zvir. 3:27.
Tinogamuchira zvakanaka vanobva kune dzimwe nyika here? (Ona ndima 16, 17)
18. Vanenge vatamira kune dzimwe nyika vangatevedzera ani panyaya yekuremekedza uye kuva vanhu vanoonga?
18 Vaya vanenge vatamira kune imwe nyika vachaita zvose zvavanogona kuti vajairane netsika dzemunyika yacho. Rute akaratidza muenzaniso wakanaka panyaya iyi. Chekutanga, akaremekedza tsika dzemunyika yaakanga ava paakakumbira kuunganidza zvaisaririra. (Rute 2:7) Haana kuona kodzero iyi sekunge kuti vamwe vanhu vaitova nechikwereti naye. Chechipiri, mashoko aakataura anoratidza kuti aionga mutsa waakaratidzwa. (Rute 2:13) Vanobva kune dzimwe nyika pavanoitawo saizvozvo, zvinogona kuvaita kuti varemekedzwe nevanhu vemunyika yavakatamira uye nevavanonamata navo.
19. Nei tichifanira kugamuchira vaeni zvakanaka?
19 Tinofara kuti achiratidza mutsa wake usina kukodzera kuwanwa, Jehovha akabvumira vanhu vanobva kwakasiyana-siyana kuti vanzwe mashoko akanaka. Munyika dzavaimbogara, vanogona kunge vaisakwanisa kudzidza Bhaibheri kana kuti kupinda misangano vakasununguka nevanhu vaJehovha. Asi sezvo vava nemukana wekunamata nesu, tinofanira kuvabatsira kuti vasaramba vachizviona sevaeni. Mutsa watichavaratidza, kunyange zvazvo tisina zvakawanda zvatinogona kuvabatsira nazvo, ucharatidza kudiwa kwavanoitwa naJehovha. Saka ‘sevatevedzeri vaMwari,’ ngatiitei zvese zvatinogona kuti tigamuchire vaeni zvakanaka.—VaEf. 5:1, 2.
^  (ndima 1) Zita rakachinjwa.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA October 2016
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA October 2016